စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသို့ဝင်ရောက်ခြင်း Martech Zone
သောကြာနေ့, သြဂုတ်လ 10, 2007 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 30, 2011 Douglas Karr
ယခုအပတ်တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာအဖြစ်ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးအပတ်ဖြစ်သည် နာယက။ နည်းပညာကုမ္ပဏီငယ်တစ်ခုဖြစ်သော Patronpath သည် Online Ordering လုပ်ငန်း၌ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
အခြားသောကုမ္ပဏီများနှင့်မတူဘဲ Patronpath သည်သူတို့၏ software ကို User Experience နှင့် Integration ပေါ်တွင်အာရုံစိုက်သည်။ ဝယ်သူအတွက် software ဖန်တီးမည့်အစားသုံးစွဲသူများအတွက် software ကိုတီထွင်ရန်အာရုံစိုက်နေကြသည်။
ကုမ္ပဏီသည်တိုးတက်မှုနှင့်နည်းပညာနှစ်ခုစလုံးတွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့တွင် ၄ င်းတို့ကိုလျှောက်ထားရန်အတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာဂုရုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါစီအီးအို Mark Gallo နဲ့ဒီနေ့စကားပြောခဲ့ပြီးငါဘယ်လောက်သဘောကျလဲဆိုတာမပြောနိုင်ဘူး။
စားသောက်ဆိုင်များအများဆုံးလိုအပ်သည့်ဒေသများသို့ကုမ္ပဏီကလျင်မြန်စွာမြန်ဆန်စွာသူတို့၏စီးပွားရေးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အဲဒီမှာအသင်းမယုံနိုင်စရာပါပဲ။ သူတို့၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်နှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏ဗဟုသုတသည်အရာရာတိုင်းကိုအလုပ်ဖြစ်စေသည်နှင့်အဘယ်အရာသည်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။
စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းကိုကြည့်လိုက်ရင်မင်းကဒီဖျော်ဖြေပွဲထဲဝင်ဖို့အဆင်သင့်ပဲလို့ထင်လိမ့်မယ်။ စားသောက်ဆိုင်အားလုံး၏ထက်ဝက်ကျဆင်းသွားပြီးပျမ်းမျှအမြတ်အစွန်းမှာကွင်းဆက်မဟုတ်သောမိသားစုစားသောက်ဆိုင်သည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည်။ အောင်မြင်သောစားသောက်ဆိုင်နှင့်ပျက်ကွက်သောစားသောက်ဆိုင်အကြားခြားနားချက်သည်ဆံပင်ကဲ့သို့ပါးလွှာသည်။ Patronpath ၀ င်ရောက်သောနေရာဖြစ်သည်။ ထုတ်ယူခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းအတွက်စားသောက်ဆိုင်သို့အွန်လိုင်းအမှာစာချခြင်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုရှေ့သို့တွန်းပို့နေသည်။
ဒီနေရာမှာ Online Orders ကဘာကြောင့်ခြားနားတာလဲ။
လူများသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအမှာယူသောအခါ၎င်းတို့သည်အစားအစာပိုမိုမှာယူကြသည်။ စဉ်းစားပါ…မိသားစုကိုစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာခေါ်သွားတဲ့အခါစားပွဲအတွက်ပီဇာကိုမှာလိုက်တယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုသင်မှာယူသောအခါနံနက်စာသို့မဟုတ်ညနက်စာအတွက်အလုံအလောက်မှာပါ။
လူတွေကပိုပိုပြီးအဆင်ပြေအောင်လုပ်နေတယ်။ ကုန်စုံဆိုင်များပိတ်နေပြီးစားသောက်ဆိုင်များလည်းကြီးထွားလာသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာရိုးရှင်းသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်များသောလူနေမှုပုံစံနှင့်စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ရန်အချိန်နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မိသားစုနှင့်ပိုမိုအရည်အသွေးမြင့်သောအချိန်များကိုဖြုန်းချင်ကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏မိသားစုအတွက်ကောင်းသောအစားအစာကိုရနိုင်ပြီးအိမ်သို့သွားသောလမ်းတွင်ကောက်နိုင်လျှင်ဘာကြောင့်လဲ။ ? အစာစားခြင်းသည်အလျင်အမြန်ဖြစ်သည်…သို့သော်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်၌သီးသန့်စားသောက်ရန်ဖွင့်ခြင်းသည်မိသားစုစားပွဲပတ်လည်တွင်စုရုံးရန်ခွင့်ပြုဆဲဖြစ်သည်။
Online မှာကြားမှုစနစ်သည်အမှာစာအမှားများကိုလျှော့ချပြီး ၀ န်ထမ်းရင်းမြစ်များကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်။ သင်အတူတကွချထားသည့်အခါမှာကြားလွှာကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ရန်တော်တော်ခက်သည်မဟုတ်လော။
လုပ်စရာတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်။ The POS စနစ်များကိုနေဆဲမျှမျှတတခေတ်နောက်ကျဖြစ်ကြသည်။ သာမာန်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့သွားပါ။ Windows 95 တွင်အလုပ်လုပ်သော Access Database မှအလုပ်လုပ်သောအားကောင်းတဲ့ POS ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သေချာတာပေါ့၊ အရမ်းကောင်းတဲ့ touch screen ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်လေးနက်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက် ၀ င်လာပြီးအိမ်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လုပ်ငန်းကအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။
အွန်လိုင်းမှာယူမှုစနစ်သည်ခြားနားချက်ရှိသည်။ အသုံးချ APIs များကို POS, Fax နှင့် Email Integration နှင့်အတူ - စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များသည်သူတို့လုပ်သမျှကိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်ပိုမိုကြီးမားသောအမှာစာများကိုထပ်မံဖြည့်တင်းခြင်းဖြင့်အစားအစာနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကိုရောင်းချကြသည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ ၀ င်လာတာပါ။ သင့်မှာယုံကြည်ဖို့သင်မြင်တွေ့ရမယ့်ကောင်းမွန်တဲ့ application တွေရှိတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုယူခြင်းအဘို့အမှည့်သောဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့်!
ဒီနေရာမှာ Indianapolis မှာငါတို့ software ကိုအကောင်အထည်ဖော်နေတယ် Scotty ရဲ့ Brewhouse.
Scotty ၏မည်သည့်အရာကိုမဆိုလမ်းလျှောက်ပါ။ အတွေ့အကြုံသည်အသုံးပြုသူနှင့်နည်းပညာနှင့်ပေါင်းစပ်ကြောင်းချက်ချင်းသတိပြုမိလိမ့်မည်။ သင် Colts ပရိတ်သတ်များအတွက် Scotty's တွင်ထိုင်ခုံတိုင်းသည်ရှေ့ထိုင်ခုံဖြစ်သည်။ တဲတစ်ခုစီ၌ကိုယ်ပိုင် LCD TV များရှိသည်။ သူတို့ကိုနေ့လည်စာစားဖို့လည်းသေချာစေပါ။ သူတို့မှာဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာရတယ်။
Doug ထံမှသူတို့ကိုပြောပြရန်သေချာပါစေ နာယက မင်းကိုပို့လိုက်တယ်!
သင့်အတွက်ရှင်းလင်းသော Barebones ကွန်ပျူတာပုံပြင်တစ်ခု ...
22:2007 pm တွင်သြဂုတ်လ 10, 33
မေလ 28, 2012 မှာ 4: 23 pm တွင်
Eat Online လို့ခေါ်တဲ့ဖြေရှင်းနည်းအသစ်ကိုငါတွေ့ပြီ
အခြားသူများထက် ပို၍ မြန်လျှင်မြန်ပြီးလွယ်ကူသည်။